Fashion for nezicathulo kwansuku eminyakeni yamuva kuye kwenziwa yonke izicathulo zakho eziyintandokazi esikhona manje. Abaningi Abaklami ezikhulunywa emhlabeni iye yamiswa kubo ngokuthi ukubonakaliswa inkululeko kalula ukunyakaza. Labo bajwayele ezemidlalo isitayela, kusobala, musa ukubuza, yini ukugqoka izicathulo. Manje, zingabantu esebenzayo hhayi kuphela e ejimini noma imincintiswano.
inhlanganisela obuhle ukugijima izicathulo ezivamile
Kusukela sizogqokani amateki? Ngokufanele ihlanganisa nabo izinto ezinjalo: stylish t-shirts, shirts, Polo shirts, sweaters, ithangi eziqongweni capris, izikhindi leggings. I ofanele kunayo isitayela ngezicathulo zokugijima, yebo, ezemidlalo. Nokho, ama-accessory esiqinile izinto bakhathale kule ndawo akudingekile. Ngokuvamile, nenkululeko ukubonakaliswa Kumele sifundwe ukubukeka. Lokhu kusho ukuthi ungakwazi ukuhlanganisa izinto ngendlela ehlukile. Ngokwesibonelo, akudingekile ukugqoka konke: ibhulukwe, ihembe nebhantshi ngokuqinile sporty. Ngaphezu kwalokho, hhayi njalo lolu hlobo kufanelekile yini esimweni esithile. Kodwa inketho, lapho amateki kotonovye ibhulukwe sihlanganise cut wesimanje nehembe nebhantshi ezigugile phezu kwakhe, ubukeka ezithakazelisayo nokunye okuningi. Kuleli fomu, ungaya futhi ukufunda, nehamba azungeze umuzi, futhi ama-movie, ngisho ukuvakashelwa.
Sneaker amagejambazo. Kusukela sizogqokani
Eminyakeni yamuva kwaba nezicathulo esiphuthumayo ikakhulu yedwa platform. Le modeli ingaphezu uzinze, ihlanganisa ubuhle of imodeli nge isithende futhi isitayela sporty. Kusukela sizogqokani izicathulo phezu Wedge? Lo magazini kuyinto ekhathaza abesifazane abaningi. Manje kungenziwa igqoke nge cishe kunoma iyiphi into. Lokhu kuthambekela manje - ukuhlanganisa engahambelani. Ngaphezu nekwetfula inhlanganisela yendabuko, futhi kufanele babhekwe esingalindelekile Ensemble Classic style jacket futhi jeans noma isiketi esifushane. Ngakho yini okufanele uyigqoke amateki amagejambazo? Ngenxa yalesi kufanelekile izicathulo:
amabhantshi ubude encane noma medium, kusukela Koton, jeans, ukudla;
Wathungela ingubo eside phezu sibalo nge uwumnikazi wenkampani;
jeans, ibhulukwe kotonovye obuphelele classical noma emifushane;
isiketi mini, midi, maxi;
iDemo obuphelele izingubo noma sporty;
Izikibha, izikibha, polo shirts, izikibha;
izikhindi, afake nebhulukwe, capris.
Qedela Ensemble of umbukwane isikhwama esikhulu noma imodeli compact phezu kwehlombe layo, kanye headgear ngesimo amakepisi, isigqoko ezisesitayeleni noma Panama City.
Shoes emsamo. Hlobo luni izicathulo, futhi noma ubani okufanelekela kangcono
Okuningi onobuhle ozinzile futhi esisebenzayo kakhulu emsamo. ndaba sifaneleka ikakhulu - upende. Lokhu izicathulo ubukeka umxhwele futhi oyophunyuka emvuleni. Ngenxa ukuphakama abanikazi njongo yalokhu imodeli amaxhaphozi akuzona esabekayo. Kusukela sizogqokani izicathulo emsamo, ngoba bavela lungelona olwawo wonke umuntu? Okokuqala, abanikazi ezinkulu usayizi izinyawo kangcono kusukela inketho okunjalo ukuwenqaba. Kungenjalo, izicathulo uyobheka besiyoba sikhulu kakhulu futhi uyonika ukubukeka okukhulu jikelele. Okwesibili, uma imilenze izacile. Le modeli kuyoba ngesimo amabhlogo enkulu okufanayo.
Yini engcono sihlanganise amateki emsamo ekuphileni kwansuku zonke
izicathulo Perfect kule sizini ekwindla-entwasahlobo. Phela, kubonakala enakho ababegqoke amajazi, raincoats, jackets ngaphandle entanyeni noboya uwumnikazi wenkampani. Kusukela sizogqokani izicathulo emsamo? Kubalulekile ukuthi ezikhethiwe ngokuvumelanayo wabheka sibalo ethize. izintokazi Leggy ukulingana ibhulukwe kancane okhrophiwe noma ibhulukwe usongwa, noma denim ovaloli e Imi namuhla. Lo nyaka futhi inhlanganisela ezifanele egijima izicathulo on a yesikhulumi ngomphetho inhlangano, ihembe zabesilisa, esakhiwe e ibhande lakhe, esiyindilinga izigqoko ezimnyama e isitayela Chaplin futhi amaphuzu Basilio ogama lakhe behlonipha cat adumile inganekwane. Lokhu umnsalo kufanelekile abantu ewubuciko abasha zokudala zokufuna ukukhombisa okwakhe yabo.
Kukhona ithiphu ewusizo kulabo ungafuni unyawo amateki emsamo wabheka zibukeke volumetric. Nge onobuhle ezifana, kutuswa ukugqoka egqinsiwe phezulu futhi ibhekwa ikhithi ubhaka medium noma usayizi esikhulu. Ngokuvumelanayo ubukeka ivesti eqolo ibhulukwe sikubeke. Le nhlanganisela ezolinganisa ivolumu.
Inhlanganisela nge jini
Ngokuvamile, akukho nokuncane ukungabaza njengoba ukugqoka amateki nge jeans. Udinga nje wazigqokisa futhi ungeze iqoqo ezemidlalo phezulu. Ngokuphelele sikhulise isitayela cap, isongo ngesimo a wristband futhi ivesti jeans. Ungakhohlwa izikhwama nezinye izesekeli, ukuqedela isithombe.
A ehlukile indaba ephathwayo - amateki amhlophe
izicathulo White zihlale imfashini kanye ubukeka umxhwele nakakhulu. Ikakhulukazi lihambisana jini zakudala. Kusukela sizogqokani ezimhlophe amateki? Kungcono ukuze bakwamukele lokhu isihlangu-amasoka jeans, ihembe noma phezulu esakhiwe e ibhande lakhe ihembe elikhanyayo. Lezi zicathulo kuhle ukucindezeleka ezishukiwe imilenze. The Ensemble futhi ofanele ukukhanya izikhindi top amhlophe, okuzokwenza kuyendlulela kahle izicathulo. Ubuhle ngokuphelele abamnyama izingubo isethi: phezulu Imi khulula futhi drainpipe ibhulukwe. wonke Lokhu iqoqo izesekeli aphelele emhlophe. Ensemble esiphelele ezinombala ofanayo futhi izingubo ezimibalabala. Fashion luyinhlanganisela obomvu zakudala, imivimbo zasolwandle kanye nezemidlalo izicathulo ezimhlophe. Kunalokho, ungasebenzisa emapheshana ka blue ezijulile noma amnyama. Manje kuyacaca ukuthi yini ukugqoka amateki amhlophe. Inhlanganisela kukhicite ukhululekile kakhulu futhi stylish.
Shoes izicathulo kanye selula izinyawo
Ngenxa inhlanganisela engavamile yezemidlalo izicathulo evamile isibe anezele ingubo e isitayela Chic ezisemadolobheni. Ozinikezele kungaba buthule wagqoka ingubo yothando, isiketi noma ibhulukwe ububanzi Denim ekuseni ngezikebhe zakudala. Futhi emuva ekhaya ngokuzumayo ukushintsha ukugijima izicathulo zabo futhi ukuhamba. Futhi izinyawo zakhe bayoba nokubonga, futhi ukubona ushintsho isihlangu akazange ahlupheke. Kunalokho, ngokuhambisana okwenzeka namuhla, kubukeka ezithakazelisayo. Okunhlobonhlobo sizogqokani ngaphansi amateki iziteleka. Ngenxa imithetho manje esiqinile ekuhlanganisweni akuyona, nakuba iwashi imfashini izincomo sisenjalo namanje.
Indlela agqoke ehholo?
Ukuya ejimini, yebo, sizogqokani izicathulo. Ukuqeqesha iyunifomu, ehlanganisa ibhulukwe shirts noma izikibha - kukho olukhulu. Ungakwazi ziyahlukahluka ukubukeka ngokugqoka ekilasini begqoka njengalaba ithenisi zabesifazane, futhi isigqoko imfashini. Libuye libe inketho ezinhle ezemidlalo iziketi, kuhlangene izikhindi polo amahembe. Umbala sneaker kulokhu zizongena cishe wonke umuntu. Kubukeka izicathulo zikanokusho into eyodwa - phezulu noma phansi - emthunzini efanayo. Ahambisanayo manje kuka ukuphrinta ezimibalabala, iyashintsha iyaphupha ibe imibala ongakhetha elikhanyayo okungafani.
Namuhla yezemfashini iye wayipha isipho kuphela labo ababehlanganyela ngenkuthalo ukuchitha isikhathi futhi ufuna ukubukeka stylish ngesikhathi esifanayo. Oholela Abaklami zomhlaba kuhlanganiswe romantic, zakudala, ezisemadolobheni isitayela izingubo izicathulo ezemidlalo. Hlanganisa izinto nomunye akunzima. Umkhuba eyinhloko imfashini amaqoqo yesimanje - lula. Kubalulekile ngakho namuhla ukuphila nobunzima, lapho abantu ngokuvamile abanalo isikhathi ukushintsha izingubo ngemva komsebenzi ukuze uqhubeke kusihlwa. Sibonga ngokukhethekile ukusho Yiqiniso, izinyawo. Manje abayona ingozi empilweni. Hamba ngesitayela!
Sundresses ngoba okhuluphele - umfuziselo ngempumelelo izingubo nokuqondisa ezibukwayo.
Kumaphi amazwe kuvumelekile imishado yabantu bobulili obufanayo
Ukudla Japanese izinsuku 13 kuyodingeka bayakhohlwa usawoti, ushukela kanye notshwala
Izithelo Isithandwa - umthombo amavithamini, amandla kanye ajabule
Indlela ukuxhuma ByFly WiFi. Ukuxhuma Ilungiselela ByFly WiFi
Anna Solovieva: indodakazi umbhangqwana edume - Tatiana Drubich futhi Sergeya Soloveva